Ikhaya Lezwe eliseduze nayo yonke into. - I-Airbnb
Ikhaya Lezwe eliseduze nayo yonke into.
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Paul & Jane
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Mey 17.
Ikhaya elinokuthula, eliyimfihlo, elihle emfuleni i-Eem enkabeni ye-Netherlands, amaminithi angu-5 ukusuka e-Amersfoort, 40 min. ukusuka e-Amsterdam kanye nesikhumulo sezindiza, ube seBelgium noma eJalimane kungakapheli ihora. Igumbi elikhulu lilala 3 eline-w / c yangasese kanye neshawa. Ibhulakufesi Elikhulu.
Ibekwe eduze komfula, le ndlu inokubukwa okuhle kwezindawo zasemaphandleni zaseDashi. Igumbi lokuphumula linamafasitela aphansi kuya ophahleni, ama-skylight avulayo futhi lingahlalisa abantu abangu-30 embuthanweni. Singakwazi ukuhlala ngokunethezeka abangu-10 etafuleni lokudlela futhi sibe nemibhede eyanele yokulala abangu-8.
ubusuku obungu-7 e- Hoogland
4.61 · 147 okushiwo abanye
Isilungiselelo sezwe esithulile esiwuhambo lwebhayisikili lwemizuzu engu-10 ukusuka edolobheni eliseduze. Izindlela ezinhle kakhulu zokuhamba namabhayisikili. Omakhelwane bethu ngaphesheya komfula banama-kayak, izikebhe kanye nezikebhe ezincane esingaziqasha kanye nendawo enkulu yephathi ekwazi ukuhlalisa abantu abangaba ngu-250.
Ibungazwe ngu-Paul & Jane
Lokhu kuzoncika kulokho okuthandwa yizivakashi kanye nokuba khona kwethu njengoba sisebenza sisekhaya.